IiNgqungquthela kunye neZenzo - iSiseko soMvuzo
Ikhaya Iintlanganiso kunye neZenzo
Isiseko soMvuzo sinceda ukuphakamisa ulwazi malunga nophuhliso oluphambili kwezesondo kunye nothando ubudlelwane kunye neengxaki eziziswe yi-intanethi. Senza oku ngokuthatha inxaxheba kwiinkomfa nakwiminyhadala, ngokufundisa nangokwenza igalelo kurhulumente nakwimicimbi yokubonisana. Eli phepha lihlaziywa ngeendaba apho ungabona khona kwaye uve Isiseko soMvuzo.
Nanga amanye amagalelo ethu…
7 Matshi 2018. UMary Sharpe uhanjiswe Impembelelo ye-intanethi ye-intanethi kwi-brain brain kwiiseli eziGrey kunye neeseli zentolongo: Ukudibana neemfuno ze-neurodevelopmental kunye nokuqonda kwabantu abasesichengeni. Umsitho waveliswa liZiko loLutsha noBulungisa boLuntu kwiDyunivesithi yaseStrathclyde eGlasgow.
5 kunye ne-6 ngo-Ephreli 2018. KwiNgqungquthela yeHlabathi yokuSebenzisa iSondo ngo-2018 eVirginia, e-USA, uDarryl Mead wanikezela ngohlaziyo Imiba yoonografi e-UK kunye noMary Sharpe wakhokelela Intlanganiso yeQela lezeMpilo yoPhando noLuntu babekho ngaphezu kweendwendwe ze-80 ezivela kwihlabathi lonke.
24 Aprili 2018. I-TRF ihambise iphepha elidibeneyo kwi Ukuthetha ngeNzululwazi ye-Cybersex Addiction kwiZindwendwe eziPhambili kwiNgqungquthela yeSizwe ye-5th kwiZenzo zoLungiso kwiCologne, eJamani.
7 Juni 2018. UMary Sharpe unikele intetho kawonkewonke I-Intanethi ye-Intanethi kunye neBraincent Brains kwiLyunivesithi yaseLucy Cavendish kwiYunivesithi yaseCambridge.
3 Julayi 2018. UMary Sharpe wanikela intetho kwi-nkcubeko eLondon Ukuxhatshazwa kwezoBundlobongela nokuShatshazwa phakathi koBantwana kwiZikolo: Ukuqulunqa iMpendulo ye-Multi-Agency.
5 Oktobha 2018. I-TRF iya kubakho kuMbutho woPhuculo lweNkomfa yezeMpilo yezeSondo eVirginia Beach, eMelika. Iphepha lethu liya kuba "Ukuququzelela ukuphuhliswa kwesondo ngokufanelekileyo kwintsha".
20 ku-22 Februwari 2017. UMary Sharpe noDarryl Mead baya kwiNgqungquthela yeSizwe ye-4th malunga neZenzo zoLungiso kwiHaifa kwaSirayeli. Ingxelo yethu kumaphepha kule ngqungquthela yashicilelwe kwinqanaba leNgcaciso yoTywala kunye nokunyanzelisa.
2 Matshi 2017. Ilungu leBhodi ye-TRF u-Anne Darling lazisa iiseshoni ezintathu zezinto ze-TRF kwiprogram ye-Perth Theater, ukufikelela kwabaphulaphuli be-650.
19 Septemba 2017. UMary Sharpe wanikela intetho kubafundi abaphezulu kunye nabazali ababiziweyo Kutheni ukhathalele nge-intanethi kuMnyhadala Wezimvo kwiKholeji yaseGeorge Watson e-Edinburgh.
7 Oktobha 2017. UMary Sharpe noDarryl Mead banikele Iphonografi kwi-Intanethi; Oko abazali, ootitshala kunye nabaSebenzi bezeMpilo kufuneka bazi e Usuku loLuntu loMbutho weNkqubela yokuThuthukiswa kweNtsholongwane yezezeSondo eSalt Lake City, eU.SA.
13 Oktobha 2017. UMary Sharpe noDarryl Mead banikele Impembelelo ye-intanethi yezempilo kwimizimba yengqondo kunye nempilo yabaselula kwi-Edinburgh Medico-Surgurg Society.
21 Oktobha 2017. I-Reward Foundation ibonise iintetho ezimbini kunye neworkshop kwi-intanethi kwiNkomfa yesiThathu yamazwe ngamazwe kwiNtsapho yaseZagreb, eCroatia.
16 Novemba 2017. I-TRF iholele i-seminar yasebusuku e-Edinburgh I-Porn Porn iyabulala Uthando. Impembelelo ye-Intanethi ye-Intanethi kwiBongo leBantwana.
18 kunye ne-19 ngo-Ephreli 2016. UMary Sharpe noDarryl Mead banikeze i-workshop "Indlela edibeneyo yokujonga iphonografi kwi-Intanethi kunye nefuthe layo" kwiNational National for the Treatment of Abusers (NOTA) inkomfa yaseSkotland e-Stirling.
28 Aprili 2016. UMary Sharpe noDarryl Mead babonisa iphepha "Iinthombe zoononografi ze-intanethi kunye nengqondo yobutsha" kwiNkomfa ye-Intanethi YOKUKHUSELEKA eLondon "Ngaba ikwi-Intanethi nje, akunjalo?": Abantu abancinci kunye ne-intanethi- ukusuka ekuhloleni ngokwesondo ukuya kwimingeni yokuziphatha ngokwesondo. . Umyalezo wevidiyo kaMary Sharpe ovela ekhaya kwiNkomfa ngu Apha.
4 Meyi 2016. Sahambisa amaphepha amabini kwi-Third International Congress of Technology Addiction, e-Istanbul, eTurkey. UMary Sharpe uthetha "Amacebo okukhusela i-Intanethi ye-Porn Addiction" kwaye uDarryl Mead uthetha ngaye "Iingozi Abantu Abaselula Abajamelana Nazo Njengezinto Ezisebenzisa Amanyala". Uhlobo olude lwentetho kaDarryl lwapapashwa kamva kwiphephancwadi lokujonga oontanga iAddicta, iyafumaneka Apha.
17-19 Juni 2016. UMary Sharpe noDarryl Mead babonise iphepha elibhaliweyo "Ungayitshintsha njani indlela ababukeli bephonografi abasebenzisa ngayo i-Intanethi babe ngabathengi abanolwazi" kwiNkomfa ye-DGSS yoPhando ngezeNzululwazi ngezeNtlalo, "isini njengempahla" eMunich, eJamani.
7 Septemba 2016. UMary Sharpe noDarryl Mead banikela iphepha "Sebenzisa ishishini kwezentlalo ukuveza amanyala kwi-intanethi njengengxaki yezempilo yoluntu" kwiNgqungquthela yoPhando lweNtsha yeNtlalo (ISIRC 2016) kwiNgqungquthela yaseGlasgow. Ibali leendaba kule nkomfa Apha. Inkcazo-ntetho yethu iyafumaneka kwiwebhusayithi ye-ISIRC.
23 Septemba 2016. UMary Sharpe noDarryl Mead banikeze iworkshop "Impembelelo eyahlukileyo ye-intanethi ye-intanethi" kwiNkomfa yoPhuhliso lweNtsholongwane yezezeNtlalo e-Austin, eTexas. Ibali leendaba kule nto ibonakala Apha. Ukurekhodwa kwerediyo yenkcazo kufumaneka ukukhuphela kwi SASH iwebhusayithi ukuhlawulwa kwe-US $ 10.00. Inombolo ye34 kwifom yolawulo.
29 Septemba 2016. UMary Sharpe noDarryl Mead banikela iphepha "Iimifanekiso zoononongo lwe-intanethi kunye nobudlova ngokwesondo phakathi kobutsha: Ukuhlaziywa koPhando loPhando lwaMazwe ngamazwe" kwiNgqungquthela yamazwe ngamazwe kwiBrighton. Yabona QAPHELA iinkcukacha zeenkomfa. Ingxelo yethu kwingqungquthela Apha.
25 Oktobha 2016. Mariya Sharpe "I-intanethi ye-intanethi kunye nengqondo yobutsha" kukhuseleko lwe-Intanethi lwabantwana nolutsha e-Edinburgh olubekwe zii-Holyrood Events. Cofa Apha yengxelo yethu.
29 Novemba 2016. UMary Sharpe noDarryl Mead bathetha "I-Sexual Harassment kunye nobundlobongela obuphathelele kwezesondo ezikolweni", umsitho obekwe e-Edinburgh yi-Policy Hub eScotland. Ingxelo yethu ngalo msitho ngu Apha.